Ii-Galaxy A70s zinikezelwe kwiintsuku ezimbalwa eIndiya | I-Androidsis
Uluhlu lwe-Samsung's Galaxy A inika ulonwabo olukhulu kwi-brand yaseKorea. Ifemi kungekudala izakusishiya neemodeli ezintsha kuyo, enye yazo yi-Galaxy A70s. Le nguqulo eguqulweyo ye-A70, Kuthengisiwe ixesha elithile eSpain. Iinkcukacha malunga nale fowuni ziye zavuza kwezi nyanga, kwaye kubonakala ngathi izakuba semthethweni kungekudala.
Imithombo yeendaba eliqela sele icebisa ukuba Kule nyanga inye kaSeptemba siya kuba nakho ukwazi ii-Galaxy A70s ngokusemthethweni. Nangona ayisiyonto i-Samsung ngokwayo esele iqinisekisile ngokusemthethweni, kodwa olu lwazi luya lusomelela.
Zimbalwa iinkcukacha ezaziwayo malunga nale Galaxy A70s, nangona kuye kwahletywa iinyanga oko Uya kusebenzisa ikhamera ye-Samsung ye-64 MP. Yinto ekudala isitsho, kodwa ayisiyiyo into eqinisekiswe yi-100% nokuba yeyiphi. Nangona iyinto abanethemba layo, ukusukela ngoku inkampani yaseKorea ayikayisebenzisi le khamera okwangoku.
Kwifowuni ikwathiwa iyakusebenzisa iprosesa ye-Snapdragon kuyo. I-Snapdragon 675 yeyona ikhankanyiweyo ukuza kuthi ga ngoku, ke ibonisa utshintsho ngokubhekisele kwiprosesa ye-Exynos ukuba imodeli eqhelekileyo izise iinyanga ezidlulileyo. Olunye utshintsho kule nguqulo.
Kuyatshiwo ukuba kwiintsuku ezimbalwa Singadibana nale Galaxy A70s iya kuboniswa eIndiya njengoko kubonisiwe yimithombo yeendaba eyahlukeneyo. Akukho mihla inikiweyo malunga noku ngalo mzuzu, kodwa ayinakuthatha ixesha elide. Okanye inokuba ngumboniso ongabhengezwanga kwaye yonke into malunga nomnxeba sele isaziwa.
Sinethemba lokwazi ukuba ngaba le Galaxy A70s ithiwe thaca ngokwenene kwiintsuku ezimbalwa eIndiya okanye ukuba kuya kufuneka silinde ixesha elide. Into ecace gca yeyokuba phakathi kuluhlu lwegama laseKorea luyaqhubeka nokukhula, kunye nokufumana iziphumo ezilungileyo kule ntsimi. Ke kujongelwe phambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ii-Galaxy A70s ziya kuboniswa kule nyanga eIndiya
Isamsung ibonisa indlela yokuyinyamekela iGold Fold kwividiyo